Kate Wolford waa madaxweynihii hore ee McKnight Foundation, oo ah aasaaska qoyska ku saleysan ee Minnesota ee doonaya in kor loogu qaado tayada nolosha ee jiilalka hadda jira iyo kuwa mustaqbalka iyada oo loo marayo deeqaha, iskaashiga, saamaynta maal gashiga, iyo istiraatiijiyadda siyaasadeed ee istiraatiijiyadeed. Waxay ka degay oo ka socota Mu'asasada Noofembar 2019.
Wolford waxay ku biirtay Mu'asasada McKnight 2006. Mudadii ay shaqeyneysey, waxay hormuud ka ahayd hormarinta yareynta jawiga iyo dadaallada joogtaynta ee Foundation. Waxay sidoo kale hogaamisay barnaamijkeeda maalgashiga saameynta, shaqada oo ay ka mid tahay calaamadeynta $200 milyan oo loogu talagalay maalgashiga saamaynta sare, sameynta wax soo saar cusub oo maalgashi kaarboon, iyo kobcinta maalgashiga raadinta aalad barashada ee ka mid ah deeq-bixiyeyaasha. Wolford sidoo kale waxay qaadatay daahfurnaan weyn si ay ula wadaagaan waxa McKnight ku baranayo waaxda samafalka iyo bulshada.
Sanadkii 2018, McKnight wuxuu lahaa hanti ku dhow $2.3 bilyan wuxuuna siiyay qiyaastii $90 milyan meelahaan: farshaxanka, sinnaanta waxbarashada, cimilada Midwest iyo tamarta, tayada biyaha Mississippi River, Minneapolis-St. Gobolka Paul iyo bulshooyinka, cilmi baarista beeraha, iyo cilmi baarista dareemayaasha.
Ka hor inta uusan ku biirin McKnight, Wolford ayaa 13 sano ku qaatay madaxweyne Lutheran World Relief (LWR), oo ah urur deeq-bixineed oo caalami ah iyo urur siyaasadeed. Ka hor, waxay ahayd agaasime barnaamijka Latin America ee LWR.
Wolford waxay leedahay taariikhda laga soo qaatay Dugsiga Gettysburg, MA ee siyaasadda dadweynaha ee Jaamacadda Chicago, iyo MA oo ka socota Jaamacadda Chicago Divinity School.
Wolford waxay u shaqeysaa guddiga agaasimayaasha 'The Johnson Foundation' ee Wingsread iyo guddiga La-talinta Bulshada ee Bangiga Dhexe ee Kaydinta ee Minneapolis & #8217; Fursadda iyo Machadka Kobcinta loo dhan yahay. Waxay sidoo kale ka shaqeysay guddiga agaasimeyaasha Greater MSP iyo Machadka Meridian.
Soo qaado Sawir